भष्ट्रचार मुक्त सुशान हुनुपर्छ-गोल्डमेडलिस्ट डा. मिलन राई (भिडियो सहित) «
भष्ट्रचार मुक्त सुशान हुनुपर्छ-गोल्डमेडलिस्ट डा. मिलन राई (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति :3October, 2019 8:13 pm
काठमान्डौ -‘ढुङ्गाको चट्टान फोरेर उम्रीन्छ पिपल साहित्य/मेहनती कहिल्य हुँदैन बिफल’ भन्ने नेपाली उखान छ । यस्तै एक ब्यक्ती सामान्या परिवार जन्मेर छात्राबृतीमा भारतमा पढदै गोल्डमेडलिस्ट हुन्छन,उहा डा. मिलन राई हुनुहुन्छ । डा. मिलन राईको परिवार नेपालको उदयपुर जिल्लामा घर भएर काठमाण्डौमा बसोबास गर्दै आएको छन । डा. मिलन राई सानै देखी लगनशिल र मेहनती थिए ।
दृष्ट्री विशेषज्ञको रुपमा काम गर्दै पढदैछ डा. मिलन राई । हाल उहाले यस सम्बन्धी बिभिन्न अनुसन्धान गरी गर्दै बिश्वस्तरिय ८ जर्नलमा अनुसन्धान प्रकाशित पनि गरी सक्नु भएको छ । भारतमा पढदै बिश्वस्तरिय ब्यक्तिहरुको बिचमा सर्बकृष्ट हुनु गर्बमात्र होइन नेपालको इज्जत बिश्वसामु राख्नु सेमेत हो ।
आखाको बिषयमा डा. मिलन राई भन्नुहुन्छ ‘ आँखा शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो जुन दृष्टिको काममा आँउछ। मानव शरीरमा दुई आँखा हुन्छन् । यो दुईटै आँखा खोपडीको अर्बिटमा अवस्थित हुन्छन् । आँखाको फोटोरिसेप्टर प्रकाशलाई विद्युतीय सिग्नलमा परिवर्तन गर्दछ । यो सिग्नललाई अप्टिक स्नायु मष्तिश्कमा पुर्याउँछ र व्यक्तिलाई दृष्टिको अनुभुति हुन्छ ।’
आँखा अति संवेदनशिल अंग हो । जब आँखाको दृष्टि गुम्छ, संसार अध्याँरो हुन्छ । हाम्रो दिनचर्या पुरै प्रभावित हुन्छ । आँखामा आउने सानो समस्याले पनि विकराल रुप लिन सक्छ । त्यसैले यसको उचित स्याहार जरुरी हुन्छ । चोटपटक लागेर मात्र नभई अन्य विभिन्न कारण आँखा खराव हुन्छ ।
हाम्रो मिडियसँग उहाको बाल्यकाल, पढाई, जिबन र अनुसन्धानको बारेमा गरिएको कुराकानी तल लिन्कमा क्लिक गर्नुहोस ।
नेपाल एयरलाइन्सले १७ नेपालीको श’व ल्याइए
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएर विभिन्न कारणले ज्या’न गु’माएका नेपालीहरुको शव काठमाडौं ल्याइएको छ ।
वि’प्लव कार्यकर्ताले पिकअप ज’लाए
मकवानपुरमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका कार्यकर्ताले पिकअप ज’लाएका छन्। ब’न्द घोषणा गरेको दिन शनिबार बिहान
राजनीतिक अवस्था अस्थिर हुँदै गयो तोकिएको समयमा निर्वाचन हुँदैन : डा. शशाङ्क
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले मुलुकमा राजनीतिक अवस्था अस्थिर हुदैँ गएकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन